Imigomo Yesevisi - loveofqueen
Siyakwamukela ku-Loveofqueen.com. Sinikeza ngezinsizakalo kuwe ngaphansi kwezaziso, imigomo, kanye nemibandela ebekiwe kulesi sivumelwano ("Isivumelwano"). Ukwengeza, uma usebenzisa noma iyiphi insizakalo ye-Loveofqueen.com (isib. Ukubeka umyalelo noma ukubhala ukubuyekeza komthengi), uzobe uhambisana nemithetho, imihlahlandlela, izinqubomgomo, imigomo, nemibandela esebenzayo kulezo zinsizakalo, futhi zifakwe kulokhu Isivumelwano salokhu kukhonjiswa. U-Loveofqueen.com unelungelo lokushintsha leli sayithi kanye nale migomo nemibandela noma kunini.
Ukufinyelela, ukuphequlula, noma okunye usebenzisa isayithi kubonisa isivumelwano sakho kuwo wonke imigomo nemibandela kulesi Sivumelwano. Sicela ufunde lesi Sivumelwano ngokucophelela ngaphambi kokuqhubeka.
Umelela futhi uqinisekisa ukuthi okungenani uneminyaka engu-18 ubudala noma uvakashela iSayithi ngaphansi kokuqondiswa komzali noma umgcini. Ngaphansi kwemigomo nemibandela yalesi Sivumelwano, i-Loveofqueen.com ngalokhu inikeza ilayisense elinganiselwe, ekhishiwe, engadluliswanga futhi engeyona eyedwa yokufinyelela nokusebenzisa iSayithi ngokuyiveza kwisiphequluli sakho se-intanethi kuphela ngenjongo yokuthenga ezitolo zakho izinto ezithengiswa kwiSayithi hhayi ukuthi zisebenzise noma zisebenzise egameni lesithathu, ngaphandle kokuthi zivunyelwe ngokucacile ngu-Loveofqueen.com kusengaphambili. Noma yikuphi ukuphulwa kwalesi Sivumelwano kuyoholela ekususweni ngokushesha kwelayisensi enikezwe kule ndima ngaphandle kwesaziso kuwe.
Ngaphandle kokuthi kuvunyelwe esigabeni esingenhla, awukwazi ukukhiqiza, ukusabalalisa, ukubonisa, ukuthengisa, ukuqashisa, ukuthumela, ukudala imisebenzi evela ekuhumusheni, ukuhumusha, ukuguqula, ukubuyisela-injini, ukuhlakaza, ukuchitha noma ukuxhaphaza leli Sayithi noma ingxenye yalo ngaphandle ngokucacile kuvunyelwe u-Loveofqueen.com ngokubhala. Ngeke wenze noma yikuphi ukusetshenziswa kwezentengiselwano kwanoma yiluphi ulwazi oluhlinzekwe kwiSayithi noma wenze noma yikuphi iSayithi ukuze kuzuze elinye ibhizinisi ngaphandle kokuthi kuvunyelwe ngokucacile ngu-Loveofqueen.com kusengaphambili. U-Loveofqueen.com unelungelo lokunqaba insizakalo, ukuqeda ama-akhawunti, kanye / noma ukukhansela ama-oda ngokuqonda kwalo, kufaka phakathi, ngaphandle kwemingcele, uma Loveofqueen.com ikholelwa ukuthi ukuziphatha kwamakhasimende kuphula umthetho osebenzayo noma kuyingozi kwizintshisekelo zika-Loveofqueen.com.
Awuyikulayisha, usakaze, noma ushicilele ngalolu Hlelo noma yikuphi okuqukethwe, ulwazi, noma okunye okukuthi (a) kwephulwa noma kwephulwa amalungelo okukopishwa, amalungelo obunikazi, izimpawu zokuthengisa, amamaki okusebenza, izimfihlo zezebhizinisi, noma amanye amalungelo okubambisana nanoma yimuphi umuntu; (b) isenzo esibi, esongelayo, esonakele, esihlambalazayo, esingafaneleki, esingcolile, noma esingaholela kunoma yikuphi icala lomphakathi noma lobugebengu ngaphansi kwe-US noma umthetho wamazwe omhlaba; noma (c) ihlanganisa noma yiziphi izimbungulu, ama-virus, izimpungushe, izicabha zomgibe, amahhashi weThrojani noma enye ikhodi eyingozi noma izakhiwo. I-Loveofqueen.com ingakunika iphasiwedi kanye nokuhlonza i-akhawunti ukuze ukwazi ukufinyelela nokusebenzisa izingxenye ezithile zeSayithi. Ngaso sonke isikhathi lapho usebenzisa iphasiwedi noma ukuhlonza, uzobheka ukuthi ugunyaziwe ukufinyelela nokusebenzisa iSayithi ngendlela ehambisana nemigomo nemibandela yalesi Sivumelwano, futhi i-Loveofqueen.com ayinaso isibopho sokuphenya imvume noma umthombo wanoma yikuphi ukufinyelela okunjalo noma ukusebenzisa iSayithi.
Uzoba nesibopho kuphela sokufinyelela nokusetshenziswa kwale sayithi yilowo nalowo osebenzisa iphasiwedi nokuzikhethela ekuqaleni owabelwe kuwe noma ngabe ukufinyelela okunjalo nokusebenzisa leli sayithi kugunyazwe nguwe, kuhlanganise ngaphandle kokunciphisa, konke ukuxhumana nokudluliselwa kanye nazo zonke izibopho (kubandakanya, ngaphandle kwemingcele, izibopho zezezimali) ezibangelwa ukufinyelela okunjalo noma ukusetshenziswa. Unesibopho kuphela sokuvikela ukuphepha nokuyimfihlo kwephasiwedi kanye nokuhlonza okunikezwe kuwe. Uzokwazisa ngokushesha i-Loveofqueen.com nganoma yikuphi ukusetshenziswa okungagunyaziwe kwephasiwedi yakho noma ukuhlonza noma noma yikuphi ukuphula noma ukusongela ukuphepha kwalesi Sayithi. Ngemva kokubhalisa, uzothola izincwajana zethu ngolwazi mayelana nokuthengisa, amakhuphoni, nokukhushulwa okukhethekile. Ungakwazi ukubhalisa ngokusebenzisa isixhumanisi kusuka kunoma iyiphi i-newsletter ye-imeyili noma isilungiselelo sakho sokubhalisa ngemuva kokungena ngemvume. Ukubhaliselwa okuzenzakalelayo kwe-Newsletter kubasebenzisi abhalisiwe.
Loveofqueen I-akhawunti yomsebenzisi
Uqinisekisa ukuthi ukuthunyelwa kwakho, okuphelele noma okuyingxenye, kucacile futhi akukhululekile kunoma yikuphi ukuphulwa okulungile kwe-IP, izingxabano noma izimangalo zomuntu wesithathu. I-Loveofqueen.com ayitholi icala lokusebenzisa kabi i-copyright noma yimuphi omunye amalungelo wabantu abesithathu ngawe. Uzama ukuvikela futhi ubekezelele uMsizi ngokumelene nanoma yikuphi ukulahlekelwa okwenziwe ngenxa yokusebenzisa okufakiwe nganoma yiziphi izinhloso.
Ngaphandle kokunye okuhlinzekwe ngenye indawo kulesi Sivumelwano noma kusayithi, noma yini oyithumelayo noma oyithumela kusayithi kanye / noma ohlinzeka ngo-Loveofqueen.com, kufaka phakathi, ngaphandle kwemingcele, imibono, ulwazi, amasu, imibuzo, ukubuyekezwa, amazwana iziphakamiso (ngokubambisana, "Ukuthunyelwa") futhi zizophathwa njengezingekho eziyimfihlo futhi ezingenasidingo, nangokuthumela noma ukuthumela, uvumelana nelayisensi engaphenduliyo yokungena kanye nawo wonke amalungelo e-IP ahlobene nawo (ngaphandle kwamalungelo okuziphatha njengobunikazi ilungelo) Loveofqueen.com ngaphandle kwenkokhelo futhi Loveofqueen.com izoba nenkululeko yamahhala, emhlabeni jikelele, engapheli, engaguquguquki, futhi ephathekayo ilungelo lokusebenzisa, ukukopisha, ukusabalalisa, ukubonisa, ukushicilela, ukwenza, ukuthengisa, ukuqasha, ukuthumela, ukuvumelanisa, ukudala imisebenzi evela Ukuthumela okunjalo nganoma iyiphi indlela futhi kunoma yiluphi uhlobo, nokuhumusha, ukuguqula, ukushintsha kabusha, ukuxuba, ukuchitha noma ukuqeda lezo ziphakamiso. Zonke iziphakamiso zizobe ziba yindawo eyodwa kuphela futhi ekhethekile ye-Loveofqueen.com futhi ngeke ibuyiselwe kuwe futhi uyavuma ukuthi ungavezi impikiswano mayelana nanoma yikuphi ukusetshenziswa kokungena ngu-Loveofqueen.com esikhathini esizayo.
Ngaphezu kwamalungelo asebenza kunoma yikuphi ukuthunyelwa, uma uthumela imibono noma izibuyekezo kusayithi, unikeza u-Loveofqueen.com ilungelo lokusebenzisa igama olihambisa ngalo noma yikuphi ukubuyekezwa, ukuphawula, noma okunye okuqukethwe, uma kukhona, ekuxhumaneni ngokubuyekeza okunjalo, ukuphawula, noma okunye okuqukethwe. Umelela futhi uqinisekisa ukuthi ungumnikazi noma ulawula zonke amalungelo kuzibuyekezo, amazwana, nokunye okuqukethwe okuthunyelwe kule sayithi nokuthi ukusebenzisa izibuyekezo zakho, amazwana, noma okunye okuqukethwe ngu-Loveofqueen.com ngeke kuphule noma ukwephula amalungelo kwanoma yimuphi umuntu wesithathu. Awuyikusebenzisa ikheli le-imeyli elingamanga, uzenze sengathi ungomunye umuntu ngaphandle kwakho, noma mhlawumbe ukhohlise u-Loveofqueen.com noma abantu besithathu mayelana nomsuka wukuthi ukuthunyelwa noma okuqukethwe. I-Loveofqueen.com ingahle, kodwa ngeke iphoqe ukususa noma ukuhlela noma yikuphi ukuthunyelwa (kufaka phakathi ukuphawula noma ukubuyekezwa) nganoma yisiphi isizathu.
Customers can cancel their order at anytime prior to shipping; please go to our Usizo & FAQ or Xhumana nathi
However, once the order has been dispatched, the order cannot be canceled, changed, or refunded. Upon receipt of the package, our Inqubomgomo Yokubuyisa. comes into effect.
Ukuthumela okuvela e-China
Inqubomgomo Yokuziphatha Yekhodi Yekhasimende
-Ukubeka izikhalazo ezidinga noma ezikhathazayo ngezikhathi ezithile, naphezu kokuba indaba isetshenziswe ngokugcwele; ngokufanayo, ukuphinda izikhalazo ziphikelela naphezu kwezixazululo ezinengqondo nezilungile ezinikezwa ngokuhambisana nezinqubomgomo zethu.
-Ukucela, ukulindela noma ukufuna abasebenzi ukuba baphule iziqondiso zenqubomgomo yenkampani, isibonelo isibalo sokubuyiselwa kwemali, isikhathi-sikhashana, isinxephezelo esikhethekile, njll; Ngokufanayo, sifuna umphumela ongenangqondo ngaphandle kwezinqubomgomo zethu nezinqubo zethu. Ngokuzenzakalelayo, inani lembuyiselo angeke lidlule inani lemali lokuqala lokukhokha elikhokhelwa ku-Loveofqueen.
-Ukushintsha ngokuphindaphindiwe uhlobo (noma ukugxila) kwesicongechunge noma umphumela oyifunayo, ingxenye yendlela, ngemuva kokuphendula okusemthethweni.
-Inombolo ethintekayo yezikhalazo uma kuqhathaniswa nomlando wenani lokuthenga inani.
Ngendlela yokuziphatha okunjalo, izikhalazo zingacelwa futhi zikwaziswe ngokulandelayo ngalokhu okulandelayo:
-Ulimi lwabo lubhekwa njengento ecasulayo, ehlukumezayo, esongelayo, futhi engamukeleki ngokuphelele.
-Bafanele bagweme ukusebenzisa ulimi olunjalo, ukwesatshiswa, kanye nosongelo.
-Ngeke kube khona ukushintshaniswa kwezokuxhumana ngale ndaba uma beqhubeka nalokhu kuziphatha.
Inqubo yokunyuka kwezikhalo
Cacisa inqubo yokukhuphuka
This process applies strictly to Customer Service issues. For separate legal issues such as copyright, please view our legal page lapha.
Uma ikhasimende lingenelisekile ngesisombululo esinikezwa yi-Service Customer yethu, ikhasimende lingathintana noMphathi wethu weThikithi ngokuthumela ithikithi elisha "ukuhambisa isigaba sesikhalazo" ngendlela elandelayo:
Sizophendula sonke isikhalazo ngaphakathi kwamahora we-24 ngaphandle kwezimpelasonto namaholide omphakathi.
Wonke umbhalo, ihluzo, izithombe noma ezinye izithombe, imifanekiso yezinkinobho, iziqeshana zomsindo, ama-logos, izaziso, amagama ezentengiselwano noma isofthiwe yezwi kanye nokunye okuqukethwe kwiwebhusayithi ye-Loveofqueen.com (ngokubambisana, "Okuqukethwe"), kuwukuphela kwe-Loveofqueen.com noma abahlinzeki bayo bokuqukethwe abafanelekile. Awukwazi ukusebenzisa, ukukhiqiza, ukukopisha, ukuthumela, ukubonisa, ukushicilela, ukuthengisa, ukuqhuba ilayisense, ukwenza, ukusabalalisa noma ukuxhaphaza noma ukuthengisa noma yikuphi okuqukethwe noma ukulahla noma yikuphi okuqukethwe ngendlela engavunyelwe ngu-Loveofqueen.com, ngaphandle kwemvume ebhalwe phansi ye-Loveofqueen.com. Ukusetshenziswa kwemininingwane yezimayini, ama-robot, noma ukuqoqa kwedatha efanayo namathuluzi wokukhipha ku-Loveofqueen.com kanye nokusetshenziswa kwezimpawu zokuhweba ze-Loveofqueen.com noma amamaki wenkonzo kumatha-meta akwenqatshelwe. Ungabuka uphinde usebenzise Okuqukethwe kuphela ngolwazi lwakho lomuntu siqu kanye nokuthenga futhi ukuhleleka kusayithi futhi kungekho enye inhloso. Iqoqo, ilungiselelo, kanye nomhlangano wazo konke okuqukethwe kule sayithi ("Ukuhlanganiswa") kuphela ku-Loveofqueen.com kuphela. Ungase ungasebenzisi okuqukethwe kwe-Loveofqueen.com noma ukuqoqwa nganoma iyiphi indlela ehlukanisa noma i-discredits Loveofqueen.com noma nganoma iyiphi indlela engabangela ukudideka noma ukwephulwa kwemithetho noma imithetho. Yonke isofthiwe esetshenziswe kulesi Sayithi ("i-Software") yindawo ye-Loveofqueen.com kanye / noma abahlinzeki bayo beSoftware. Okuqukethwe, Ukuhlanganiswa neSofthiwe konke kuvikelwe ngaphansi kwemithetho ye-copyright kazwelonke, kazwelonke nakwamanye amazwe. Wonke amalungelo angaboniswa ngokucacile agcinwe ngu-Loveofqueen.com. Abahlukumezi bazoshushiswa ngokugcwele umthetho.
U-Loveofqueen.com uyaqaphela futhi ihlonipha wonke amalungelo kanye nezimpawu zokuthengisa. Njengalokhu, noma yikuphi ukusetshenziswa kwethelevishini, isithombe sokunyakaza, umculo, umkhosi wefilimu noma amanye amagama noma iziqu azikho uxhumano ku-Loveofqueen.com futhi yiwona kuphela impahla yabanikazi be-copyright noma abahwebi. Izigqoko zethu ziphefumulelwe isitayela esidumile futhi yizinto zethu zokubuyiselwa kwezinto ezigqoke izidumbu ezinkundleni zakho zikamabonakude ozithandayo kanye nesibhakabhaka esibomvu, noma zingagunyaziwe, zivunyelwe, noma zixhunyiwe kulezi ziboniso nganoma iyiphi indlela futhi azisho ukuthi ziphulwa kwanoma yiziphi izimpawu zokuhweba ezibhalisiwe noma amalungelo okukopisha.
Inqubomgomo Yokuphulwa Kwempahla Yengqondo
I-7. Isitatimende sakho sokuthi ulwazi olungenhla nesaziso sinembile, futhi ngaphansi kwesigwebo sokukhohlisa, ukuthi ungumnikazi we-copyright noma ugunyaziwe ukuba wenze egameni lomnikazi ogama lakhe elikhethekile okusolakala ukuthi liphulwa.
Ukuqedwa kanye Nethonya Lokuqedwa
Ngaphezu kwanoma yiziphi ezinye izixazululo zomthetho noma ezilinganayo, i-Loveofqueen.com kungenzeka, ngaphandle kokukwaziswa kwangaphambili kuwe, ngokushesha uqede isivumelwano noma ususe noma yikuphi noma wonke amalungelo akho anikezwe ngaphansi kwalesi Sivumelwano. Uma kunqunywe ukuvalwa kwalesi Sivumelwano, uzoyeka ngokushesha ukufinyelela nokusetshenziswa kwesayithi kanye no-Loveofqueen.com, ngaphezu kwanoma yiziphi ezinye izixazululo ezisemthethweni noma ezilinganayo, ngokushesha uphonsa wonke ama-password (s), kanye nokuhlonza i-akhawunti okukhishwe kuwe futhi ukuphika ukufinyelela kwakho futhi usebenzise le Site ngokuphelele noma ingxenye. Noma yikuphi ukuqedwa kwalesi Sivumelwano ngeke kuthinte amalungelo afanele kanye nezibopho (kufaka ngaphandle kwemingcele, izibopho zokukhokha) zalabo ababambe iqhaza ngaphambi kosuku lokuqedwa. /
Ukuziphendulela Nokunciphisa Kwemfanelo
Ngaphandle kokuthi kunikezwe ngokuhlukile emigomeni yokudayiswa evamile elawula okufanayo komkhiqizo ngamunye kule sayithi, leli sayithi, imikhiqizo enikezwe ukudayiswa kuyo kanye nokuthengiselana okuqhutshwa kuyo kuhlinzekwa ngu-Loveofqueen.com ngesisekelo "njengoba" . I-Loveofqueen.com ayenzi izinkulumo noma iziqinisekiso zanoma yiluphi uhlobo, ukuveza noma ukuphawula, mayelana nokusebenza kwesayithi noma ulwazi, okuqukethwe, izinto zokwakha noma imikhiqizo efakwe kule sayithi ngaphandle kokuthi kunikezwe lapha ngokugcwele ngokuvunyelwe ngumthetho osebenzayo, I-Loveofqueen.com ihlonipha zonke iziqinisekiso, ziveza noma zichazwe, kufaka phakathi, kodwa zingagciniwe, eziqinisekisiwe eziphathelene nokuthengiswa nokufaneleka komsebenzi othile, ukungahambi kahle, isihloko, ukuthokoza okuthulile, ukunemba kwedatha, nokuhlanganiswa kwesistimu. Leli sayithi lingabandakanya ukungalungi, amaphutha noma amaphutha we-typographical. U-Loveofqueen.com awuvumeli ukuthi okuqukethwe ngeke kuphazamiseke noma iphutha likhululekile. Ngokwezinga eliphezulu elivunyelwe ngumthetho, Loveofqueen.com ngeke iphoqe nganoma yikuphi ukulimala kwanoma yiluphi uhlobo oluvela ekusetshenzisweni kwaleli sayithi, kufaka phakathi, kodwa kungagcini, okungaqondile, okuyisijeziso, okuyisibonelo, okukhethekile noma okulimazayo. Ngokwezinga eliphezulu elivunyelwe ngumthetho osebenzayo, inkokhelo ye-Loveofqueen.com yakho yonke imali yakho (kungakhathaliseki isisekelo sesenzo) ngeke idlulele ngokugcwele inani lemali ekhokhwa nguwe ku-Loveofqueen.com phakathi nenyanga ngokushesha ngaphambi kwalesi senzo kuthiwa senze inkokhelo ye-Loveofqueen.com.
Sicela uqaphele ukuthi kungase kube khona imiyalo ethile esingakwazi ukuyamukela futhi kufanele ikhansele. U-Loveofqueen.com unelungelo, ngokubona kwakhe kuphela, ukwenqaba noma ukukhansela noma yimuphi umyalo nganoma yisiphi isizathu. Ezinye izimo ezingase zenze ukuthi i-oda lakho likhanseliwe zibandakanya ukulinganiselwa kunani elitholakalayo lokuthenga, ukungalungi noma amaphutha kumkhiqizo noma ulwazi lwamanani, noma izinkinga ezikhonjiswe ngesikweletu sethu kanye nomnyango wokugwema ukukhwabanisa. Singase futhi sidinga ukuqinisekiswa okwengeziwe noma ulwazi ngaphambi kokwamukela noma iyiphi i-oda. Sizokuxhumana nawe uma konke noma ingxenye ye-oda yakho ikhanseliwe noma uma ulwazi olwengeziwe ludingeka ukuze wamukele i-oda lakho.
Siye sazise amakhasimende ethu ngesikhathi sonyaka kaKhisimusi kusengaphambili ngezingqwembe namaphephandaba, futhi sanikeza iziphakamiso zosuku lokugcina lokugcina nezindlela zokuthumela kule nkathi. Ngakho-ke, asikwazi ukubamba iqhaza uma into ingafiki ngesikhathi sikaKhisimusi.
Bobabili amaqembu avumelana ukuthi, ngokulandela ukuthunyelwa kwe-oda, ukuthutha kuwumthwalo kuphela wenkampani yezinkampani zangaphandle. Phakathi nalesi sigaba, ubunikazi obuphelele bomkhiqizo (s) kungowomthengi; zonke izibopho ezihambisanayo nezingozi ngesikhathi sokuthutha kuzothathwa ngumthengi.
Ngenkathi i-Loveofqueen.com izama ukunikeza umkhiqizo onembile nolwazi lwamanani, amanani noma amaphutha we-typographical angenzeka. Loveofqueen.com ayikwazi ukuqinisekisa intengo yento kuze kube yilapho uyala. Uma kwenzeka ukuthi into efakwe ohlwini olungalungile noma ngolwazi olungalungile ngenxa yephutha kumanani entengo noma ulwazi lomkhiqizo, Loveofqueen.com izoba nelungelo, ngokuqonda kwethu kuphela, ukwenqaba noma ukukhansela noma yikuphi ama-oda abekwe kulowo nto. Uma kwenzeka ukuthi into ayithengi, i-Loveofqueen.com, ngokwengqondo yethu, ingaxhumana nawe ngemilayezo noma ikhansele i-oda lakho futhi ikukwazise ngokukhansela okunjalo.
Izindleko ku-Currencies ehlukene
Intengo yemikhiqizo ethengiswa ngu-Loveofqueen.com isekelwe kumanani abalwa emaDola ase-US (US $). Amanani aboniswe kwezinye zezimali aguqulwa esuka kuma-US Amadola ngokusho kwamazinga amaningi okuguqulwa kwamanje. Ngenxa yezindleko zemali zemali, amanani aboniswa emaqenjini angewona ase-US e-Site, ngaphandle kwekhasi ngalinye lomkhiqizo, angase angabi khona okwamanje. Izindawo zeSayithi lapho izinhlangano ze-non-US zemali ezingahle zingabi khona zifaka phakathi, kodwa azikhawulelwanga, amabhanela wokukhangisa, amakhasi wokuphromotha, nolwazi kumakhasi wesigaba somkhiqizo. Intengo eboniswe kwikhasi lomkhiqizo ngamunye, kungakhathaliseki ukuthi yiyiphi imali yenkolo, intengo yamanje ozoyikhokhela ku-Loveofqueen.com, ngaphandle kokuthunyelwa.
Lezi zimo zilawulwa futhi zilawulwa kuphela ngaphansi komthetho waseShayina ngaphandle kokungqubuzana nemigomo yemithetho.
Leli sayithi lingase liqukethe izixhumanisi kwezinye izingosi ezise-Inthanethi eziphethwe futhi ziqhutshwe yizinkampani zangaphandle. Uyavuma ukuthi i-Loveofqueen.com ayinabo obhekene nokusebenza noma okuqukethwe okukhona noma nganoma iyiphi isayithi elinjalo.
Kungakhathaliseki ukuthi yimuphi umyalo wamakhasimende yilokho esikuthumela khona. Asikwazi ukubophezeleka ukuthi ikhasimende lithola into engalungile uma bebeka i-oda elingalungile.
Uyavuma ukuthi ikhambi lika-Loveofqueen.com elisemthethweni nganoma yiluphi ukuhlukunyezwa kwangempela noma okusongelwa kwalesi Sivumelwano ngeke kube ngokwanele nokuthi i-Loveofqueen.com izoba nenelungelo lokusebenza okuqondile noma ukusizwa okungenayo, noma kokubili, ngaphezu kwanoma yikuphi ukulimala okwenziwe ngu-Loveofqueen.com okuvunyelwe ngokomthetho ukuba alulame, kanye nezindleko ezifanele zanoma yiluphi uhlobo lokuxazulula izingxabano, kubandakanya, ngaphandle kwemingcele, izimali zommeli.
Asikho isenzo sokukhishwa kwe-Loveofqueen.com ngamalungelo awo noma izixazululo ngaphansi kwale migomo nemibandela kuyosho noma yisiphi isibopho sokunikeza noma yikuphi okufanayo, okuzayo noma okunye okushiya.